30inch Steel Marasha Moto Pit
[Inogara kwenguva refu] Gomba remoto rekunze rinogadzirwa nesimbi mesh uye furemu yakasimba, inogara kwenguva refu.
[Multipurpose] Dhizaini yakasimba ine yakakosha pateni yakanakira kudziya, BBQ, ice bucket.
[Design] Decorative square fire pit inoratidzira inoyevedza faux stone line dhizaini.
[Kuchengetedzwa] Mesh chivharo chinovharira moto, kudzivirira pfarivari kana marara kubhururuka.
[Musangano]Easy kuisa. YEMAHARA chivharo chekuchengeta iyi gomba remoto rakachena uye kudzivirira kuita ngura.
Ungashandisa marasha mugomba remoto here?
Kuve negomba remoto rekuseri inzira inotonhorera yekuungana nemhuri kana shamwari. Makomba emoto anogona kuva chero chinhu kubva pagomba rakacherwa pasi kusvika pachinhu chakasimba chesimbi, zvidhinha, kana zvimwe zvinhu zvakaomarara. Asi, vashandisi vanowanzofarira kuyedza izvo zvinogona kupiswa mugomba ravo, uye vazhinji vanoshamisika nezve marasha’ s kushanda mune imwe.
Hongu, unogona kushandisa marasha mugomba remoto. Marasha ihuni iyo’Yakapiswa munzvimbo isina oxygen, asi ichiri kukwanisa kupisa zvakanyanya, kugadzira kupisa, uye isarudzo huru kana ukaronga kubika mugomba rako remoto.
Kune dzimwe nzira dzekupisa moto wako, zvichienderana negomba raunaro. Regai’s inotarisa nzira dzakasiyana dzekupisa imwe.
Kukuchidzira Gomba Remoto Nemarasha
Marasha anogadzirwa kuburikidza nekupisa huni neokisijeni shoma kumativi. Moto gomba vanofarira kushandisa chinhu nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Inowanikwa nyore uye inotengwa mune chero chitoro.
Inochengetedza kupisa kwakanyanya
Hapana hwema hwehutsi hunoburitswa, saka kana hukashandiswa kugocha, kunhuhwirira kwehutsi kwakakunda’t kukurira chikafu.
Kusarudza Rudzi Rwakakodzera Rwemarasha
Kune marudzi emarasha akasiyana anowanikwa.
Kusvinwa marasha. Marasha aya ndiwo enguva dzose aunogona kutenga kubva kune chero girosari. Vanosanganisa zvidimbu zvidiki zvehuni uye zvimwe zvinhu zvakaita sembeu, uye kuwedzerwa kwemakemikari mabhandi nemabatidza kunobatsira kupisa nekukurumidza uye kugara yakabatidza kwenguva refu.
Kusvinwa marasha nehuni dzinopfungaira. Kuputa muchisango, kufanana hickory, vari rapinzwa marasha kupa it aisvuta pakubika kana iwe bvunzurudza. Mhando mbiri dzemarasha akatsikirirwa ane a‘match light’ shanduro.
Mazimbe emazimbe anogadzirwa nehuni dzakaoma dzakasvibira uye dzakapiswa. Kupisa kwakanyanya uye kusave nemakemikari kunopa chikafu kunaka kuri nani.
Zvakanakira Kuva Negomba remoto wemarasha
Sei uchifanira kuwana gomba remoto? Aesthetics haisi iyo chete mukana wekuva neimwe.
Zvakapfuura: Outdoor propane fire gomba
Zvinotevera: Mutengo Wemufekitari weChina Yakachipa CE Inotakurika Girazi 3 Burner Gasi Chitofu Tafura Pamusoro Cooktops Gasi
Diy Gasi Moto Gomba
gomba remoto webindu
Gasi Uye Huni Moto Gomba
gomba remoto rekunze
Patio Gasi Moto Gomba
Gadheni barbecue 24-inch smoker grill
Kupeta Charcoal grill pamwe nekuputa grills
Kubikira kunze kwemarasha grill
Kufashukira kunze barbecue grills